ပြောမှားဆိုမှားရှိရင်တောင် အမြဲကိုင်နေတဲ့နတ်တွေ ခုလိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဟာတွေကျတော့ ဒီတိုင်းကြည့်နေလို့ နတ်တွေကို Social Punishment လုပ်လိုက်တဲ့ ကောင်းမြတ်စံ – Cele Snap
ပြောမှားဆိုမှားရှိရင်တောင် အမြဲကိုင်နေတဲ့နတ်တွေ ခုလိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဟာတွေကျတော့ ဒီတိုင်းကြည့်နေလို့ နတ်တွေကို Social Punishment လုပ်လိုက်တဲ့ ကောင်းမြတ်စံ
ပရိတျသတျကွီးရေ…. ထငျရှားတဲ့ပါးခြိုငျ့လေးနဲ့ ထူးထူးခွားခွားဆှဲဆောငျမှုရှိနတေဲ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးကြျော ကောငျးမွတျစံဟာဆိုရငျ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာရရှိထားသလို ဇာတျကားတှလေညျးမြားစှာ ရိုကျကူးထားပွီး ပရိသတျ တှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားသူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျနျော..။မငျးသားကောငျးမွတျစံကတော့ လတျတလောဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ရပျတညျနကော ဆိုရှယျမီဒီယာ ထကျမှာ speak out လုပျပေးနတေဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲက တဈဦးပဲ ဖွဈပါ တယျ။
အာဏာသိမျးတဲ့ နကေ့ စပွီး ယခုခြိနျထိလညျး ပရိသတျတှေ ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ အမှနျတရား ဘကျကနေ ရပျတညျတိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ သူတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးမှီကလညျး ဒီလိုအခြိနျမှာ နိုငျငံ့အတှကျ တဈကယျ့တဈကယျကို မခံမရပျနိုငျလို့စတေနာနဲ့ပွောတဲ့သူတှရှေိသလို နိုငျငံရေးအကွောငျးပွုပွီး ပုဂ်ဂိုလျရေးအရ တိုကျခိုကျတဲ့သူတှလေညျးရှိတယျဆိုပွီး သတိပွုရမယျ့ အကွောငျးကိုလညျး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ဖျောပွထားပါသေးတယျ။ ဒီတဈခါမှာတော့ နတျတှကေို Social Punishment လုပျတယျဆိုတာကို ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈ ပါတယျ။
“နတျတှလေညျး ဘယျသှားသနေလေညျး မသိဘူး။အပေါ့အပါးလေးမြား သှားခငျြလို့ လယျကှငျးဖွဈဖွဈ သဈပငျအောကျလေးပဲဖွဈဖွဈ ကနျတော့ပွီးသှားမိရငျတောငျ ကိုငျလိုကျတဲ့နတျ၊ပွောမှားဆိုမှားရှိရငျတောငျ ကိုငျလိုကျတဲ့နတျ၊သူတို့အပွငျ နှဈယောကျမရှိဘူး။တောငျးပနျလညျးမရ ၊ကနျတော့ပှဲနဲ့လညျး မရ။ပါဝါတှေ စှတျပွနတေော့တာအခုလို တဈပွညျလုံး ဒုက်ခပေးနတေဲ့ ဟာတှကေငြွိမျကွညျ့နတေယျပေါ့။ကိုငျလိုကျစမျးပါလား။ပွောတော့ နတျတဲ့၊ကိုငျထားတော့ ဓားကွီးနှဈလကျနဲ့၊နောကျတဈခါ သားတျောကွီး အရကျနဲ့ ကွကျကွျောလေး ဆကျသစမျးဆိုမှ….ဇနေဲ့ လကျြဆားပဲရမယျ……” ဆိုပွီး ဖျောပွလာတာကို ပရိသတျတှေ အတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျတာပဲ ဖွဈပါ တယျနျော…….။
Source: Kaung Myat San’ FB account
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ထင်ရှားတဲ့ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ထူးထူးခြားခြားဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် ကောင်းမြတ်စံဟာဆိုရင် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားသလို ဇာတ်ကားတွေလည်းများစွာ ရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ် တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။မင်းသားကောင်းမြတ်စံကတော့ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေကာ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ထက်မှာ speak out လုပ်ပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ဦးပဲ ဖြစ် ပါတယ်။
အာဏာသိမ်းတဲ့ နေ့က စပြီး ယခုချိန်ထိလည်း ပရိသတ်တွေ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ အမှန်တရား ဘက်ကနေ ရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ သူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမှီကလည်း ဒီလိုအချိန်မှာ နိုင်ငံ့အတွက် တစ်ကယ့်တစ်ကယ်ကို မခံမရပ်နိုင်လို့စေတနာနဲ့ပြောတဲ့သူတွေရှိသလို နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြုပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီး သတိပြုရမယ့် အကြောင်းကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ နတ်တွေကို Social Punishment လုပ်တယ်ဆိုတာကို ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
“နတ်တွေလည်း ဘယ်သွားသေနေလည်း မသိဘူး။အပေါ့အပါးလေးများ သွားချင်လို့ လယ်ကွင်းဖြစ်ဖြစ် သစ်ပင်အောက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကန်တော့ပြီးသွားမိရင်တောင် ကိုင်လိုက်တဲ့နတ်၊ပြောမှားဆိုမှားရှိရင်တောင် ကိုင်လိုက်တဲ့နတ်၊သူတို့အပြင် နှစ်ယောက်မရှိဘူး။တောင်းပန်လည်းမရ ၊ကန်တော့ပွဲနဲ့လည်း မရ။ပါဝါတွေ စွတ်ပြနေတော့တာအခုလို တစ်ပြည်လုံး ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ဟာတွေကျငြိမ်ကြည့်နေတယ်ပေါ့။ကိုင်လိုက်စမ်းပါလား။ပြောတော့ နတ်တဲ့၊ကိုင်ထားတော့ ဓားကြီးနှစ်လက်နဲ့၊နောက်တစ်ခါ သားတော်ကြီး အရက်နဲ့ ကြက်ကြော်လေး ဆက်သစမ်းဆိုမှ….ဇေနဲ့ လျက်ဆားပဲရမယ်……” ဆိုပြီး ဖော်ပြလာတာကို ပရိသတ်တွေ အ တွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…….။
အခုလိုဘ၀ရဲ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေမှာ မရှိရှိတာမျှဝေပြီး ရင်ဘက်နဲ့ပေါင်းသင်းပေးတဲ့သူတွေကို တစ်သက်ဘယ်တော့မှမမေ့ကြောင်းပြောလာတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်
နိုင်ငံဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ခွင့်မရတော့တဲ့ အလှမယ်သူဇာဝင့်လွင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်